Marxuum Cilmi Cusmaan Boqorre oo Wiilkiisa Xildhibaan loo doortay – Kalfadhi
Marxuum Cilmi Cusmaan Boqorre oo Wiilkiisa Xildhibaan loo doortay
Waxaa goordhow soo gaba gaboobay doorashada kursi ka banaanaa Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya kursigaas uu ka dhintay Marxuum Xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqorre oo katirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashada ayaa ka dhacday Xarunta Fadhiyada Baarlamaanka ee Golaha Shacabka waxaana goob ahaa mas’uuliyiinta guddiga doorashooyinka Madaxa banaan iyo Xubno kale.
Xildhibaankaan cusub ayaa lagu magacaabaa Cadnaan Cilmi Cusmaan Boqorre waana Wiilka Marxuum Boqorre oo 23kii 2aad ee Sanadkaan lagu dilay degmada Kaaraan ee Gobalka Banaadir.
Xildhibaan Cadnaan ayaa la tartamay hal musharax waxa uuna helay inta badan codadkii la dhioibtay mana aheyn doorasho sida kuwii hore. Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey), ayaa shaacisay natiijada doorashada waxayna sheegtay in uu guuleestay Cadnaan Cilmi Cusmaaan Baqorre oo aabihiis kursigaan ka dhintay.
Alle ha u naxariistee Cilmi Cusmaan Boqorre ayaa koox hubeysan waxay bil ka hor ku dishay degmada Kaaraan ee Gobalka Banaadir ilaa hadana sharciga lama soo taagin Kooxdii dilka geysatay oo ay hey’adaha ammaanka sheegayn in la qabtay.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta shir yeelanaya